2010 ကိုမျှော်လေသော်… | The World of Pinkgold
ကလိုစေးထူး on July 15, 2008 at 10:25 pm said:
တွေးစရာတွေ တော်တော်ပေးတဲ့ ပို့စ်ပဲ။ ညီမရေးတာကို ဖတ်ပြီးတော့ (ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိ…၊) အကိုအောင်သူငြိမ်း ရေးဖူးတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း စာအုပ်ထဲက အချက်အလက် တချို့ကိုတောင် သတိရမိတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေ ပွင့်လာမယ်ဆိုတာကရော…၊ ဘယ်သူ့အတွက်ပွင့်မှာလဲ၊ ဘာတွေ ပွင့်လာမှာလဲ..။ မကြာမီ..လာမည်…မျှော်… ထင်တယ်။
May Burma on July 16, 2008 at 1:06 am said:
good post. Keep up your international flare to compete with neighbors. It will definitely be good for all.
ပီတိ on July 16, 2008 at 3:35 am said:
Pinkgold တွေးထားတာလေး အင်းမတန်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်။ Free Trade Agreement တွေလုပ်ပါပြီတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပါပြီလဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ သူများတွေ လာရောင်းသမျှ အကုန်ဖွင့်ပေးပြီး ကိုယ်ကတော့ ဘာမှပြန်မရောင်းနိုင်ဖြစ်မှာပါ။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက အင်မတန်စီးပွားရေးလုပ်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားပါ။ BIMST-EC ထဲမှာလည်းပါတယ်၊ GMS ထဲမှာလည်းပါတယ် ASEAN ထဲမှာလည်းပါတယ်၊ တရုတ်နဲ့လည်း ပြေလည်တယ် ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပဲ ပွဲစားလုပ်စားရင်ပဲ တော်တော်လေး အလုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပထ၀ီအနေအထားအရပါ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကို နေရာပေး သေချာပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။
လုပ်တတ်ရင် တိုင်းပြည်က အင်မတန်ချမ်းသာမှာပါ။ တိုင်းပြည်ချမ်းသာရင် တိုင်းသူပြည်သားတွင်မက အုပ်ချုပ်သူလည်း ချမ်းသာတာပါပဲ။ အခုတော့…
Si on July 16, 2008 at 8:45 am said:
I have read about AFTA at one of the journal.
I think that one may effects Myanmar from bad side. Becasue only the person who have “Capital” can take this advantage of free trade. So for our counrty business men may facingagreat competiation wih ASEAN trader. My opinion is that, If we can’t prepare for that AFTA, we will facingadifficulties at 2010.
ဗမာပြည်သား on July 17, 2008 at 8:57 am said:
မပင့်ရေ ကျွန်တော်ကတော့ 2010 မှာ မြန်မာပြည် နွေရာသီမှာ တစ်နေ့ 10နာ၇ီ အပြည့်အ၀မီးရရှိဖို့ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်
hlatsis on July 17, 2008 at 12:14 pm said: